Fitsipika miaramila sy ny singa ao aminy
Ny satan'ny tafika an'ny tafika dia andiam-pitsipika, lalàna ary fitsipika mifehy ny olona izay manao asa an-tery na fifanarahana ao amin'ny tafika. Izy io dia voarafitra ary mizara ho fizarana ary ...
Toeram-ponenana manohitra ny taratra. Ny fiarovana ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny sy ny fiarovana ny tsirairay raha sendra loza
Ny fanaraha-maso ny taratra ataon'ny orinasa indostrialy sy ny toby nokleary dia tsy manilika ny mety hisian'ny loza. Noho izany, mila mahafantatra ny fomba hiarovana ny ainy sy ny fahasalamany ny tsirairay amin'ity toe-javatra ity. Ny lahatsoratray dia misy ...
Mpitandro ny filaminana Freelance. Torolàlana hikarakarana ny hetsika ataon'ny polisy tsy mpiasa
Tamin'ny 2014 aprily 44, nankatoavin'ny filoham-pirenena ny lalàna faha-XNUMX. Ity lalàna normative ity dia mifehy ny fomba sy ny fepetra amin'ny fandraisana anjaran'ny mponina amin'ny fiantohana ny filaminam-bahoaka. Natao hamoronana rafitra mazava hisarihana ny olom-pirenena ny lalàna ...
Inona ny hevitry ny anarana Dmitry amin'ny zaza iray, ny fitarony amin'ny faritanin'olona iray
Misy ny fiheverana fa ny anjaran'ny olona iray dia misy fiantraikany tsy amin'ny daty nahaterahany ihany, fa koa amin'ny alàlan'ny famantarana ny zodiaka nahaterahany, ary koa ny anarana niantsoana azy. Izany rehetra izany tao ...
Haavo ara-tsaina - famaritana, lafin-javatra ary zava-misy mahaliana
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika hoe inona ny haavon'ny saina (tontolon'ny eritreritra). Amin'ny fampianarana esoterika (herin'ny maizina) (New Age, Theosophy, Hermeticism) dia antsoina hoe ny habetsaky ny (natiora) natiora (izao rehetra izao), noforonina avy amin'ny hevitra, eritreritra ary saina ...
Inona no holazaina ny taona 1970? Inona no biby asehony amin'ny horoscope atsinanana?
Mba hahafantarana bebe kokoa ny tena dia afaka mitodika any amin'ny loharano isan-karazany ny olona. Ny iray amin'izany dia ny horoscope sinoa, izay afaka mitantara zavatra betsaka momba ny olona iray. Ity lahatsoratra ity dia mety ho an'ireo izay ...
Fifindra-monina mankany Islandy avy any Rosia: fepetra, fomba
Ny fifindra-monina mankany Islandy dia lavitra ny toerana malaza indrindra. Saingy matetika no hita any Russia io. Na izany na tsy izany dia olom-pirenena maro no liana amin'ity fizotrany ity. Manokana, satria ...
61 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,890.